Kayakairan Daily | कायाकैरन दैनिक || एभरेस्ट भ्यूतिरको यात्रानुभूति (यात्रा संस्मरण) – kayakairan.com
एभरेस्ट भ्यूतिरको यात्रानुभूति (यात्रा संस्मरण)
स्याङ्बुजेमा ठूलै हिउँ परेपछि मेरो मन झन् चञ्चले भएको छ । हिजो परेको हिउँको कारण आज आकाश पूरै खुलेको छ । मेरो ठीक अगाडि–पछाडि, दायाँ–बायाँ जताततै हिउँ परेका सुनौला हिमालहरू छन् । म सगरमाथा नेसनल पार्क छिर्ने ढोकाबाट नछिरी जंगलबाट अलि पर छु । जंगलको बीचमा भएकाले अलि–अलि डरको महसुस पनि भइरहेको छ ।
एउटा कौवा नजिक आएर काँ–काँ नभनी घुर्र–घुर्र गरेर गयो । फेरि आयो । सानो छेस्को ताकें । भाग्यो ।
चौरमा छु । घाम मजाले लागेको छ । हावाका झोकाले कहिले हानेको छ त कहिले शान्त छ । म बसेको ठाउँबाट उत्तरपूर्व धेरै हिमालहरू सेताम्मै भएर टल्किरहेको छ ।
म पनि अब सगरमाथा चिन्ने भइसकेको थिएँ । वरिपरिका हिमालका उचाइभन्दा मैले देख्दा सगरमाथा केही होचोजस्तो देखेको थिएँ । अरु हिमाल नजिक र सगरमाथा अलि टाढा भएर पनि त्यस्तो भएको हुनुपर्छ । अरु हिमालमा पनि निकै हिउँ थियो । तर, सगरमाथा अलिक फरक थियो । हिउँको अत्यन्तै सुन्दर एउटा मनमोहक पहाड जस्तो, विश्वको शीर हामी सबैको गौरव सगरमाथा ! नाम्चे बजारभन्दा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सबै टल्किएका थिए आज । म दोस्रो पटक केहीबेर बसेर फर्केको थिएँ । त्यस दिन पनि निकै सुन्दर थियो यहाँको दृश्य ।
सगरमाथाको दृश्य अवलोकन गर्न एक्लै एभरेस्ट भ्यू होटल पनि गएको थिएँ । स्याङ्बुजेसम्मको उकालोले मेरो सातो लिएको थियो । म निकै ठूलो साहस बोकेर हिंडेको थिएँ । मलाई थाहा थिएन–यो एभरेस्ट भ्यू होटल कहाँ छ । तर, पनि चोर क्याम्पपछिको निकै ठाडो उकालोको यात्रा सुरु गरें । पछिल्लातिरको जुन अप्ठ्यारो थियो । उकालो हिंड्न अहिले त्यति सारो जस्तो थिएन । तर, थोरै हिंड्नेबित्तिकै थकाइ लाग्ने यो प्रक्रिया भने ज्यूँका त्यूँ थियो ।
एक घण्टाभन्दा बढीको अथक प्रयासपछि म स्याङ्बुजे एयरपोर्ट पुग्ने तयारीमा थिएँ । डाँडाबाट कसैले नियाल्दै थियो । म आफ्नै सुरमा हिंडिरहें । मैले म भएतिर हेरिरहने मान्छेलाई एयरपोर्टको मैदानमा भेटें । उसले भन्यो–“दाइ, जाने हो ?” मलाई काठमाडौंको यात्रुवाहक बसको कर्मचारीको याद आयो । मैले निकै छिटो अनुमान लगाएँ र भनें–“हजुर प्लेनको मान्छे हो ?” उसले ‘हो’ भन्यो । “तपाईं पनि जाने हो”, उसले फेरि सोध्यो । “ए ¤ होइन म त यसै घुम्न आएको”, भनें । उनी प्लेनका क्याप्टेन रहेछन् । उता ठूलो हेली स्टार्ट भयो । उनी श्रीएयरको सो हेलीतर्फ अगाडि बढे । म पनि पछि–पछि लागें । मलाई हेली चाहिएको थियो । फाप्लुबाट सामान ल्याउनु थियो । उनको नम्बर मागें । नम्बर मात्र भयो भने पनि बेलुका कुरा गर्थें जस्तो लाग्यो । मोबाइल निकालें र भिडियो अन गरें । उनीसँग नम्बर सोधें किनकि मसँग त्यति समय थिएन । नम्बर टिप्नुभन्दा यही उपाय उपयुक्त ठानें मैले ।
फाप्लुबाट आउने सामान यही एयरपोर्टमा मात्रै झर्दाेरहेछ । यो एयरपोर्टमा अरु कुनै हेलिकप्टर नआउने रहेछ । नाम्चे वरपरका सबै व्यापारी र होटल व्यवसायीहरूले यसैको माध्यमबाट सामान ढुवानी गर्दा रहेछन् । भिडियो अन थियो । भिडियोमा मेरो प्रश्न र उनका उत्तर कैद हुँदै थियो । उनी हेली देबे्र बनाएर हेलितर्फ लागे । म दाहिने बनाएर अर्का साइडमा लागें । पङ्खाले निकै गति लियो । वरपरका सामान अनलोड गर्न जम्मा भएका कामदारहरू अलि पर–पर लागे र केही सामानहरूको छेल पारेर बस्न थाले । मेरो मोबाइल अन थियो । भिडियो खिचिएको थियो । हेलिले गति लियो । ग्राउन्डमा ठूलाठूला गिट्टी, खाल्टाखुल्टी थिए । वरपर कुइरीमण्डल भयो । गति लिएको केहीबेरमा थोरै रोकिएजस्तो ग¥यो र भुइँ छाड्यो। पूर्व हँुदै केहीबेरपछि दक्षिण भएर आफ्नो गन्तव्यतर्फ गयो । निकै अनौठो महसुस गरें ।
उनले आफ्नो नाम प्रकाश बताएका थिए । तल नाम्चेबाट उकालो जाँदै गरेका मान्छेहरू नै उनका यात्रु रहेछन् । हुनत खुम्जुङ, यामे, थम्बुतिरबाट पनि यात्रुहरू आउँथे आउन त । जाँदा ३५०० मात्र भाडा लाग्ने भएर ३÷४ दिन लगाएर हिंडेर जानुभन्दा हेलिकप्टर भई जाँदा रहेछन् फाप्लुतिर । मैले त्यहाँ सोधें–“त्यो एभरेस्टभ्यू होटल कहाँनिर हो ?” मैले सोधेकै महिलाले उत्तर दिइन् । उनले जाने बाटो बताइन् । मेरो ध्यान उनीतिरै थियो । मलाई कहाँ–कहाँ स्वर सुनेजस्तो लाग्यो । उनले मास्क लगाएकी थिइन् । मैले अलिकता अडकल काटें–म अस्ति आउँदा आपतकालीन दीर्घशंकाका समयमा उपयोग गरिएको होटलकी मालिक्नी हुन् उनी । मैले उनीसँग परिचय नवीकरण पनि गरें । मोबाइल हेरें । भिडियोलाई स्टप गरिसकेको रहेछु । साथी भनेकै यही मन र एउटा मोबाइल त हो नि ! मनले खिच् भन्यो । केही दृश्यहरू मोवाइलमा कैद गरें ।
समयले १ बजाइसकेछ । अरुले तयार पारिदिएको बाटोबाटै हिडें । एउटा ठूलो होटल आयो । त्यो डाँडाको होटलको देबे्र सगरमाथा नेसनल पार्कको धुपी र सल्ला थियो भने दाहिनेतर्फ सानो बाटो र बाटोभन्दा पनि देब्रेतर्फ पर्खाल थियो । त्यही होला भन्यो मनले र त्यतैतिर लागें । बाटो सुरु भयो । केही पूर्व अनि धेरै परसम्म देखिने गरी उत्तर । धेरै परसम्म हेरें, कोही थिएन । एउटा रातो चुच्चो भएको कालो कौवा पखेटालाई छड्के पारेर आवाज निकाल्दै टाउका माथिबाट फुत्त उड्यो ।
यस्तो बाटोलाई पनि बाटै भनेर अगाडि बढ्दै गएँ । हातको मोबाइलमा भिडियो अन भइसकेको थियो । कतिबेर हिंडेपछि सगरमाथा मजाले देखिने होटल पुगिन्छ थाहा थिएन । बाटोको वर्णन गर्ने खुबी मसँग छैन किनकि तलतिर छङ्गाछुर भिर माथितिर उस्तै । बाटाको चौडाइ मुस्किलले दुई हात कतै–कतै बढी भए तीन हात । मलाई सानैदेखि भीर भनेपछि सातो जान्छ । निकै डरलाग्दो र सुनसान बाटो छ । चौरी, खच्चड, याक र कालो कौवा, यत्ति हो मैले देखेको । अहिले म बसिरहेको ठाउँ वरिपरि डाँफे छन् भन्ने सुनेको हो । तर, म अहिले यहीं बसेको तीन घण्टाभन्दा बढी भइसक्यो । कालो कौवाभन्दा अरु केही देखेको छैन । म भन्दामाथिको केही सल्लाका रुखहरूले घाम छेकिएको छ र चिसो अनुभव गर्न थालेको छु । हावा निकै चिसो चलेको छ ।
सगरमाथाभन्दा पश्चिमपट्टिको हिमालमाथि आकाशमा बादल छ । अरु हिमालमा घाम लागिरहेको छ । सगरमाथा टल्किएको छैन घामले किनकि बादलको छायाँ परेको छ ।
डराउँदै–डराउँदै कहिले भित्ताका कालो ढुंगा र कहिले साना छिरबिरे परेका पात भएको थुचुक्क परेको बुटामा समाउँदै अगाडि बढिरहें । मोबाइलमा तलतिरका भीर र माथितिरका भीर कैद गर्दै केही मनमा आएका तर्कनाहरूलाई गुन्गुनाएको थिएँ । मैले केहीबेर अगाडि एउटा होटल पनि छाडेर आइसकेको थिएँ । त्यो होटलको आँगनमा पाइप बेर्दै गरेको एक अधवैंसेलाई सोधेको थिएँ–“दाजु एभरेष्ट भ्यू होटल कति टाढा छ ?” उसले अलिकति पर हो भनेको थियो । त्यसपछि आशा पलाएको थियो । तर, निकै परसम्म उस्तै तलमाथि भीर र बीचमा सानो डरलाग्दो सानो धर्को बाटो मात्रै थियो ।
एउटा थुम्कोमा याक मज्जाले पाउर मारेर बसिरहेको रहेछ । बाटोभन्दा तल्लो भागमा निकै साँघुरो ठाउँ । फेरि भीरको टाकुरामा त्यति ठूलो जनावर देखे पछि म दङ्ग परें । कस्तो डर नभएको ! त्यसले केही गर्दैन भन्नेमा म ढुक्क थिएँ किनकि म लुक्ला झरेपछि ५०० भन्दा बढी याकसँग जम्काभेट भएको थियो । म त्यसलाई पार गरेर अगाडि बढें । बाटोभन्दा मुनि कालो जनावर देखियो । मेरो होस उड्यो । तर, होस उडेर धेरै टाढा जान नपाउँदै पखेराभरि नै मैले देखें–काला याकहरू चरिरहेका । म केहीबेर उभिएर हेरिरहें । ओहो ! कस्तो अचम्म, त्यति ठूला जनावरहरू त्यस्तो डरलाग्दो भीरमा कसरी अडिएर चरिरहेछन् । त्यसपछि डराइन । अझै केहीबेर हिंडेपछि निकै फराकिलो चौर आयो । चौरमा मोबाइलसँग निकै कुरा गरेर अगाडि बढें । अलिपर केही रुखहरू भएका ठाउँमा एउटा ठूलो घर देखियो । मलाई लाग्यो कि अब भने मेरो गन्तव्यको टुंगो लाग्यो ।
“दाजु नमस्कार”, मैले भेटिएका एकजना स्थानीय सज्जनलाई भनें ।
४०÷४५ वर्षका तामाङ अनुहार परेका तिनले ‘नमस्कार’ फर्काए । मैले भने–“म चितवनबाट आएको एभरेष्ट भ्यू होटलको निकै कुरा सुनेर ।”
“ए आउनुहोस् न के एक्लै आउनुभएको ?”, उनले सोधे । “हजुर एक्लै आएको”, मैले भनें । उनले “जानोस् भित्र” भने । मलाई लागेको थियो–होटलभित्र नछिरी कतै छेउकुना अथवा छतबाट हेर्ने होला । तर, त्यस्तो भएन । म कालो ठूलो ढोकालाई धकेलेर भित्र छिरें । तर, म अलमल्ल परें किनकि सबै कोठामा विदेशीहरू थिए । यताउति घुमें, बाटो छैन । एकजना एउटा कोठाबाट बाहिर निस्कियो । मैले मौका छोपें, “दाजु भ्यूका लागि ठाउँ कता हो ?” म नयाँ मान्छे केको लाज ! ‘त्यहींबाट बाहिर जानोस् न’ भनेर उसले सानो खाली ठाउँ हुँदै एकपल्ले सिसाको ढोकातर्फ देखायो । उसले देखाएतर्फ १५÷२० पाइला चालें । ढोकाबाट बाहिर निस्किएँ ।
आहा ! कुनै सुन्दर कथाको काल्पनिक संसारभन्दा पनि औधी सुन्दर ! सेता हिमाल, आँखाले देखेजति सबै टलक्क टल्किएका । सुन्दर निकै सुन्दर हिमालै हिमालको सहर ! बिहान सुन र दिउँसो चाँदी बन्ने हिमाल देखेर को पो खुसी हुँदैन र ? हिउँका थुम्काहरू जीवनका थुम्का झैं लाग्छन् । पृथ्वीकी अप्सरा हुन् हिमाल । हिमालकी अप्सरा हुन् सगरमाथा । सगरमाथालाई तिब्बतीहरू देवी मान्छन् र चोमोलोङ्मा नाम दिन्छन् । म भने सगरमाथालाई हिमालकी अप्सरा भन्छु । अझ भन्छु सगरमाथालाई–उत्तरकी अप्सरा, नेपालकी पहिचान । अप्सराहरूकी अप्सरा अर्थात मेनका, उर्वशी, रम्भा, तिलोत्तमाको संयुक्त संयोजन । एउटी अप्सराको कल्पना मस्तिष्कमा कुँद्छु । फोटामा फोटोग्राफरले खटाएर कैद गरेको सगरमाथाको आकृति हेरेर भन्नु होला अतिशयोक्ति छ लेखनमा । यो अतिशयोक्ति होइन । यो त हृदयतलमा कैद भएको अतुलनीय भावानन्द हो ।
दृश्यानन्द सहोदर भनौं जस्तो पनि लाग्छ । हो, फोटो मात्र हेरेर सगरमाथा चिनिंदैन । त्यसरी चिनिने भए एकपल्ट आरोहण गरेपछि फेरि–फेरि जोखिम मोलेर किन आरोहण गरिरहन्थे र सगरमाथामा । आँखाको लेन्स हुँदै मनको क्यामराभित्र कैद भएको सगरमाथाको आकृति म कलमले कोर्न सक्दिन । मलाई सगरमाथाले आजन्मका लागि एउटा तिर्खा भरिदिन्छ । सायद ओरोहीहरूमा पनि सगरमाथाले मलाईजस्तै तिर्खा भरिदिन्छ होला । यसैले तिर्खा मेट्न दश, पन्ध्र, अठार पटकसम्म आरोहण गरिरहन्छन् आरोहीहरू ।
मैले केहीबेर आँखा झिमिक्क नगरी हेरिरहें । यो दृश्य अद्भूत थियो । यहाँबाट देखिएका जमिनका भागहरू सेताम्मै थिए । विदेशी पाहुनाहरू निकै प्रफुल्ल थिए । उनीहरूले आकाशमा विभिन्न प्रकारका विद्युतीय सामग्रीहरू उडाइरहेका थिए । त्यहाँ एउटा उल्लासमय मेला लागे झैं थियो । म एकटक लगाएर हिमाललाई नै निहारिरहेको थिएँ । मलाई यो दृश्य हेरिरहँदा एउटा पाको तामाङले भनेको कुरा याद आयो–एउटा विदेशी नाम्चे बसेको एक हप्तासम्म पनि बादल लागिरह्यो रे ! ऊ नाम्चेबाट ३ पटक एभरेष्ट भ्यू होटलसम्म आयो रे ! आकाश नखुलेकाले उसले हिमालहरूको दृश्य हेर्न नपाएर क्वाँ–क्वाँ रोएको थियो रे !
ऊ अमेरिकादेखि दोस्रोपटक एभरेष्ट भ्यू हेर्न नेपाल आएको रे ! तर, ऊ प्रकृतिले घुम्टो नउघारिदिंदा फेरि आउने वाचाका साथ फर्किएर गयो रे ! यो घटना सुन्दा त्यतिबेला खासै नौलो नलागे पनि अहिलेको यो दृश्य देखिसकेपछि मेरो मनले आज उसलाई नै सम्झियो । मेरा वरिपरिका टेबलहरू विदेशीहरूले भरिएको थियो । एउटालाई नेपालीजस्तो लागेर सोधें–“दाजु कहाँबाट आउनुभएको ?” ऊ पनि चाइनिजजस्तै थियो । बौद्धको तामाङ रहेछ । उसँग औपचारिक कुराकानी भयो । मैले उससँग परिचय गर्नुको आशय थियो, सगरमाथाको परिचयसँगै अरु हिमालका नामहरूको विषयमा सोधपुछ गर्नु । फोन उचालेर भिडियो तयार गर्न लागें । ऊ भएतर्फ मोवाइल तेस्र्याएँ । हिमालको विषयमा सोधें । उसलाई पनि खाँसै आउँदो रहेनछ । “सगरमाथा त्यही हो”, भन्यो । त्यत्तिकैमा मेरो मोबाइलले काम गरेन । मोबाइल ह्याङ भो । अफ पनि भएन चल्दा पनि चलेन । एयरपोर्टबाट एभरेष्ट भ्यूसम्मको दृश्य र मनका भावोद्वेग जति सबै यसैमा कैद गरेको थिएँ । फुर्सदमा मजाले हेरौंला भनेर जोगाएको सम्पदा डिलेट हुने डरले म थचक्क कुर्सीमा बसें ।
खुल्दै खुलेन मोबाइल । विदेशीको चार्जर मागेर चार्ज गरें । केही लागेन अनि अफ गर्ने ठाउँमा बेस्सरी थिचेपछि बल्ल अफ भयो । पछि खुल्यो पनि । तर, त्यसमा लगातार काठमाडौंदेखि लुक्ला र लुक्लादेखि नाम्चेसम्मका निकै यादगार भिडियो र फोटाहरू सबै मेटिएछन् । निकै खल्लो लाग्यो तर म ठाउँमा थिएँ । मैले त्यतिबेला निराश हुनु भनेको मुख्र्याइँ गर्नु हो । क्षतिपूर्तिका लािग नै सही केही तस्विरहरू खिचें । मनभरि यादहरू समेटेर म बाहिर निस्कन खोज्दा निकै आकर्षक चित्र मेरो आँखामा प¥यो । त्यो सगरमाथालगायतमा हिमालहरू त्यही होटलको सिसामा अत्यन्तै मनमोहक देखिएको रहेछ । मन थाम्न नसकेर सम्झौता स्वरूप केही तस्विर खिचें अनि बाहिर निस्किएँ ।
फोनको घण्टी बज्यो । चितवनबाट आएको रहेछ । सुप्रसिद्ध निबन्धकार रामबाबु घिमिरे सरको फोनले वाल्मीकि साहित्य सदनका थाती कामहरूको स्मरण गरायो । ‘सम्प्रेषण’का अघिल्लो अङ्कका विज्ञापन उठाउनु छ, आगामी अङ्कका लागि केही साहित्यकारहरूसँग भेटघाट पनि गर्नु छ । मेरा जिम्मेवारीका कामहरू छन् उता पनि । समाजसेवी तथा साहित्यकार दाजु तिलकराज शर्मा र लक्ष्मण अङ्कलका फोन पनि यस बीचमा आएका थिए । रामबाबु सरको नेतृत्वमा हामी एकै साहित्यिक यात्रामा पनि छौं । मेरा साहित्यिक कार्यमा लक्ष्मण अङ्कलको प्रेरणादायी सल्लाह, रामबाबु सरका मार्गदर्शक सुझाव अनि तिलकराज शर्मा दाजुका आत्मिक निकटता म कहिल्यै भुल्न सक्दिन । धनराज गिरी र आमोदी गुरुको आफ्नै खाले साहित्यिक विशेषता छ चितवनमा । उहाँहरूले पनि यता आएपछि एकदुई पटक फोन गर्नुभयो । यता प्रकृतिको मनमोहक छवि उता आत्मीय जनका दूरभाष सान्निध्य अवर्णनीय थियो ।